Gold Miner World Tour: Arcade Gold Rush Game 1.3.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.4 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု Gold Miner World Tour: Arcade Gold Rush Game
Gold Miner World Tour: Arcade Gold Rush Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆုံးစွန်သောရွှေ digger အတွေ့အကြုံကိုအတွက်ရွှေအလုအယက်💰Feel! 💎
🔅တူးထုတ်ခြင်းနှင့်ရွှေအလုအယက်အတွေ့အကြုံကိုခရီးစဉ်အတွက်အကြီးမားဆုံးကိုရွှေသွေးပြန်ကြောငါ့! ရွှေ Miner World Tour သင်သိနှင့်ကိုချစ်ပြီးအများကြီးပိုရွှေမိုင်းလုပ်သားဂန္ဂိမ်းရှိပါတယ်! သင့်ရဲ့သတ္တုတွင်းလှည်းပြီးပြည့်စုံသောအနေအထားမှရွှေ့ခြင်းနှင့်ရွှေ, ကျောက်မျက်, စိန်နှင့်ပင်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဘဏ္ဍာကိုကိုင်ဆောင်သောထွက်တူးဖို့လက်ျာယခုအချိန်တွင်သင့်ရဲ့ခြေသည်းကိုဖွင့်! ကျောက်သားနှင့် TNT ထွက်သည် Watch!
အဆိုပါဆာမူရိုင်း Miner နှင့် Bat Miner တူသောအေးကိုရွှေ digger ဇာတ်ကောင် featuring ကတ်များများစွာ, သတ္တုတွင်းလှည်း, ခြေသည်း, ကြိုးနှင့်ပင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအမျိုးမျိုးကိုစုဆောင်းရန်🎁ပွင့်လင်းဘဏ္ဍာကိုကိုင်ဆောင်သော! ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ကျောက်သားထွက်ရှင်းလင်းရန်မရဏ Ray နှင့် Kame ပေါက်ကွဲမှုကဲ့သို့အကြောက်မက်ဘွယ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသက်ဝင်ဖို့မော်ကွန်းသို့မဟုတ်ဒဏ္ဍာရီကဒ်များအပြည့်အဝထားတပ်ဆင်! dinky pickaxe နုတ်ဆက်ပါတယ်နုတ်ဆက်ပါတယ်! ⛏
🌏ရွှေ Miner ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးစဉ်အားလုံးကျောင်းကသတ္တုတွင်းဂိမ်းပရိသတ်တွေအတွက်ဟောင်းကျောင်းကိုဂိမ်းပါ! ယခုအတူတူကပြောပါ:
"ငါသည်ရွှေ digger နှင့်ဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူပါတယ်!"
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! ရွှေ Miner ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးစဉ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကစားသို့သော်အချို့ဂိမ်းပစ္စည်းများလည်းအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင်, သငျသညျရွှေ Miner World Tour play သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အနည်းဆုံးအသက် 13 နှစ်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးက network ကိုချိတ်ဆက်မလိုအပ်ပါ။
- 200 ကျော်လက်လက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆင့်ဆင့်မှတဆင့် Play 12 ကွဲပြားဒေသများအနှံ့ပြန့်နှံ့, ထူးခြားတဲ့အတားအဆီးများနှင့်ရန်သူနှင့်အတူအသီးအသီး
- ဆုလာဘ်သော့ဖွင့်ဖို့ကိုကိုင်ဆောင်သောရယူနိုင်သောအစွမ်းထက်သစ်ကိုကတ်များစုဆောင်းရှိပြီးသားသူတွေကို upgrade
- သင့်အကြိုက်ဆုံးမိုင်းလုပ်သား, သတ္တုတွင်းလှည်း, ခြေသည်း, ကြိုးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်သင်၏ကဒ်စုဆောင်းခြင်း Build နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်
- ပုံပြင် Mode ကိုနှင့် PvP အောင်နိုင်ရန်သင့်အန္တိမကုန်းပတ်တည်ဆောက်မည်
- Real-time အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ Duel ကစားသမား
Gold Miner World Tour: Arcade Gold Rush Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Gold Miner World Tour: Arcade Gold Rush Game အား အခ်က္ျပပါ
Gold Miner World Tour: Arcade Gold Rush Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Gold Miner World Tour: Arcade Gold Rush Game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.3.4
ထုတ်လုပ်သူ SENSPARK CO., LTD
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://senspark.com/privacy-policy
App Name: Gold Miner World Tour: Arcade Gold Rush Game
Release date: 2019-07-12 17:01:04
လက်မှတ် SHA1: 03:7D:88:6D:14:3D:4D:52:24:A0:46:BD:2C:6A:BB:0D:70:70:5C:25
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Senspark
အဖွဲ့အစည်း (O): Senspark
နယ်မြေ (L): Ho Chi Minh
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Binh Thanh
Gold Miner World Tour: Arcade Gold Rush Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ